DHAGEYSO,,Shacabka magaalada beydhabo oo lagu Amrey in guri kasta hortiisa ay ku xiraan nalal. | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta DHAGEYSO,,Shacabka magaalada beydhabo oo lagu Amrey in guri kasta hortiisa ay...
Gudoomiyaha degmada beydhabo xasan macalin axmed biikoole iyo gudoomiye kuxigeenka amniga iyo siyaasada degmada isxxaaq maxamed caliteygaab ayaa maanta qalab isiugu jira fiilooyiin iyo nalal ku wareejiyey maamulka shirkada korontada beeko .
Qalabkaan lagu wareejiyey shirkada ayaa loogu tala galey si wadooyinka magaalada beydhabo loogu xiro nalal si bulshada ay uhelaan iftiin xiliyada habeenkii .
Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada degmada beydhabo isxaaq maxamed cali teygaab ayaa sheegey in maalin kahor ay soo indho indheeyeen wadooyinka magaalada ee ubahaan iftiin sidaasdaraadeedna hada usuura gashey in shirakada beeko kuwareejiyaan qalabkaan.
Gudoomiyaha degmada beydhabo xasan macalin axmed biikoole ayaa dhiniciisa sheegey in lacagta lagu soo gadey aqabkaan ay tahay lacagtii canshuurta aheyd ee lagu soo aruuriyey bulshada waxa uuna sheegey in sida ugu dhaqsiyaha badan loo howlagali doono.
Ugu danbeyn xasan macalin axmed biikoole gudoomiyaha degmada ayaa bulshada ugu baaqey in ay xafidaan nolalka lagu xirayo wadooyinka magaalada beydbao waxa uuna sidookale gudoomiyaasha xaafadaha beydhabo ku amrey in gudoomiye kasta xafadiisa kuxiro nal hadii uu kuxiri waayana xilka laga qaadi doono.
Hadalka gudoomiyaha ayaa kusoo adaya iydoo Intabadan wadooyinka waa weyn ee magaalada kuxirnaayeen solaro kushaqeeynayey cad ceeda kuwaasi oo markii danbe lala adegey soolaradii iftiiminayey wadooyinka iyadoona ilaaiyo hada la ogeyn cida falalka noocaasi geysta,